Formula နို့ဗူး လိုအပ်ခြင်း – Burmese Baby
Web Master | December 18, 2018 | Articles, Food | Comments
အပိုင်း (၄) ပိုင်းခွဲပြီး ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးလိုပါတယ်။
အပိုင်း (၁)- ဘယ်အခါလို?
ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် အောက်ပါ အခြေအနေတွေမှာ မိခင်နို့ကို နို့ဗူး ကူညီဖြည့်စွက်ဖို့ လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။
(၁) မွေးစကိုယ်လေးချိန် ၁၅၀၀ ဂရမ် (သို့) ၃.၃ ပေါင် အောက်နည်းသော ကလေးငယ်များ
(၂) လမစေ့ဘဲ ၃၂ ပတ်အောက် မွေးသောကလေးငယ်များ
(၃) အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် မွေးမွေးချင်း အကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်သောကလေးငယ်များ
(၄) မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသော်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်တက်သင့်သလောက်မတက်သော ရင်သွေးငယ်များ
အပိုင်း (၂)- လိုရင် ဘာလုပ်မလဲ?
Formula နို့ဗူး လိုအပ်မယ်လို့ထင်ရင် မိခင်နှင့်သားဖွားဆိုင်ရာ သူနာပြုများ၊ လက်မှတ်ရ သားဖွားဆရာမများ၊ မိသားစု ဆရာဝန်များ (သို့) ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ကုသနေဆဲဖြစ်သောကလေးဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Formula နို့ဗူးဖြည့်စွက် တိုက်မယ်ဆုံးဖြတ်ရင် အောက်ပါအချက်များကို သတိပြုပါ။
-နို့ဗူးတိုက်ခြင်းကြောင့် မိခင်နို့အစို့နည်းသွားရင် မိခင်နို့ အထွက်နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
-ကလေးအချို့က နို့ဗူးအရသာကို ပိုကြိုက်ရင် မိခင်နို့ကို ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။
-မိခင်နို့အုံတင်းခြင်းကြောင့် နာကျင်မှုအလွန်အကျွံခံစားရတဲ့အခါ မိခင်က နို့တိုက်ချင်စိတ် လျော့ပါးသွားနိုင်ပါတယ်။
မိခင်နို့တိုက်တာ ပို အဆင်ပြေလာချိန်၊ ကလေးရောမိခင်ပါ ပြန်လည်နေကောင်းသွားချိန်၊ ကလေး ကိုယ်လေးချိန်ပုံမှန်ဖြစ်သွားချိန်မှာ နို့ဗူးရပ်ပြီး မိခင်နို့တမျိုးထဲသာ တိုက်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ နို့ဗူးကို တစ်နေ့ ၃၀ မီလီလီတာလောက်လျှေ့ာပြီး မိခင်နို့ကို တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး ၈ ကြိမ်မှ ၁၂ ကြိမ်ထိတိုက်ပေးပါ။ ဖြည့်စွက်စာစကျွေးချိန် ၆ လကျော်သော်လည်း မိခင်နို့ ကို ပမာဏ မလျှော့ချလိုက်ပါနဲ့။
မှတ်ချက်- မိခင်က ကလေးမမွေးခင် ကျန်းမာရေးပြဿနာကြောင့် ရင်သားခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူထားသူများ၊ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် နေမကောင်းသူများတွင် မိခင်နို့တိုက်ရန် လုံးဝအဆင်မပြေခဲ့သော် Formula နို့ဗူးလိုအပ်ပါသည်။
Reference: Australia Breast Feeding Association, Raising Children Network Australia
ငှက်ပျောလုံးကြော် (banana balls)